डब्ल्यूएचओको यस्तो डरलाग्दो चेतावनीले युरोपभर त्रास — Imandarmedia.com
१गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
२बिल गेट्सले डिभोर्स गरेकी श्रीमती मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरे यति धेरै सम्पति र खाेले यस्ताे बेग्लै रहस्य
३नेपाली भौतिकशास्त्री साहुले अमेरिकामा पाए साढे ३ करोडको अवार्ड
४संसद सचिवालयमा कार्यरत उपसचिवको कोरोना संक्रमणबाट निधन
५नगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय, संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार, एम्बुलेन्स फ्री
६घनश्याम र योगेशलाई फकाउने ओलीको प्रयास असफल
७एकाएक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हेलिकोप्टर चढेर किन पुगे हेटौंडा
८बादललाई बनाए राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार
९ओलीसँग कुनै सहमति भएको छैन, भ्रममा नपर्नुस् : माधव नेपाल
१०प्रधानमन्त्री ओलीसँग घनश्याम र योगेशको मध्यरातसम्म वार्ता, के बिषयमा भयो छलफल
११बागमती प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३६ हजार भन्दा बढी
१२सबै देशका उडान बन्द, भारतसँग मात्रै किन खुल्ला ? यस्तो रहेछ कारण
संसारभरी एकैदिन ९ लाख नयाँ संक्रमित भेटिए, यीमध्ये भारतमा मात्रै फेला परे ३ लाख ८६ हजार
भारतमा कोरोना अनियन्त्रित स्थितिमा पुगिसकेको छ । यसको अन्दाज यसरी पनि लगाउन सकिन्छ कि संसारभरी भेटिएका नयाँ बिरामीमध्ये करिब ४०–५० प्रतिशत भारतमा मात्रै भेटिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा संसारभरी ८.९२ लाखमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । यीमध्ये भारतमा मात्रै ३ लाख ८६ लाख बिरामी भेटिएका छन् ।
महामारीका कारण दैनिक भइरहेको मृत्युमा पनि भारत शीर्ष स्थानमा छ । पछिल्लो २४ घण्टामा संसारभरी १५,१४२ ले ज्यान गुमाएका छन् जसमध्ये भारतमा सबैभन्दा बढी ३,५०१ को मृत्यु भयो ।मृत्युको यो आँकडा सरकारी हो । घाट र समाधि स्थलको कहानीले अरु नै कथा बयान गरिरहेको छ । भारतमा संक्रमितको दर पनि बढिरहेको छ । अघिल्लो हप्ता हरेक सय जनाको परीक्षण गर्दा १८ बिरामीको रिपोर्ट पोजेटिभ आइरहेको थियो भने अब २१ जनामा पोजेटिभ केस भेटिएको छ ।
बिरामीको संख्या यसरी नै बढिरहे स्थिति थप गम्भीर हुनसक्नेः
भारतमा जब १० लाख सक्रिय संक्रमित थिए त्यतिबेलादेखि अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, औषधी र भेन्टिलेटरको कमी हुन थालेको थियो । अब यो आँकडा ३१ लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । यसमा हरेक दिन एक लाखभन्दा बढीको वृद्धि भइरहेको छ । यदि सक्रिय संक्रमित अर्थात्, उपचार गराइरहेका बिरामीको संख्या वृद्धि भइरह्यो भने भविष्यमा यसले विकराल समस्या निम्त्याउन सक्छ । अहिले भारतमा भएको स्रोत साधनले १० प्रतिशत बिरामीलाई मात्र धान्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।
यसैबीच रुघा लगाउने भाइरसले मानिसको शरीरका कोषहरूबाट कोरोनाभाइरसलाई गलहत्याइदिन सक्ने तथ्य अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्। मानवकोषमा आफूले सङ्क्रमण गर्ने प्रयासमा केही भाइरसहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ।
कोरोनाभाइरस कसरी पराजित हुन्छ?
तर रुघा निको भइसकेपछि तथा राइनोभाइरसको प्रतिरोधात्मक प्रतिकार्य निस्तेज भइसकेपछि कोभिड हुने सम्भावना कायम रहन्छ। “खोप, सरसफाइका उपाय अनि भाइरसहरूबीच हुने अन्तर्क्रियाले सार्स-कोभ-२ ठूलो मात्रामा घटाउन सक्छ। तर खोपबाट नै अधिकतम प्रभाव पर्छ,” डा. मर्सियाले भने।